IMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13 ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu! | Ndisuka mac
Kwaye ngoku sinokuthi uhlobo olusemthethweni lweMacOS High Sierra 10.13 iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwiVenkile ye-Mac App yabo bonke abasebenzisi beMac. U-Apple usandula ukukhupha le nguqulo intsha ngokusemthethweni kwaye sonke sonwabile ngokufika kwayo.
Iinguqulelo ezintsha ze-beta ezazifikile kwezi ntsuku de kwasungulwa inguqulelo ye-GM eyakwenza kwacaca ukuba utshintsho olunqabileyo lunqabile kwaye imisebenzi emitsha yayijolise ngqo kuzinzo lwenkqubo, iNkqubo entsha yeFayile ye-Apple, iindaba I-Safari, ifomathi entsha ye-HEVC yenkcazo ephezulu yefomathi yevidiyo kunye nokuhambelana kwayo namaqonga ophuhliso lwenyani yokwenyani, apho sabona ezimbalwa Idemo enomdla kwiWWDC.
Kuhlobo lwangaphambili iMacOS Sierra yeza nenoveli ebalulekileyo kubasebenzisi beMac, uSiri, kule meko njengoyena ndoqo wale nguqulelo yamva nje iMacOS High Sierra ekhutshwe namhlanje, siqaqambisa into ebalulekileyo, ulawulo lweefayile ze-APFS. Kuzo zombini iimeko, ukongeza kwezi, ezinye izinto ezintsha zongezwa, ezinje ngezi zikhankanyiwe ngasentla kunye nezinye, kodwa okuqaqambileyo apha kukuba nokanye sijamelene notshintsho olukhulu ukuba ayisiyonto eqhubekayo kwiinguqulelo, inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Kuyinyani ukuba le APFS iseluhlaza ngandlela ithile kubasebenzisi beMacOS, kodwa kuyacaca ukuba kwezi nguqulelo zilandelayo abafana baseCupertino baya kusebenza nzima ukuphucula oku. Ngoku icebiso linje ngenguqulelo nganye entsha efika: Ukuba iMac yakho iyayamkela le nguqulo intsha, ungathandabuzi okwesibini kunye nohlaziyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » IMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13 ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu!
UAlcino Oliveira sitsho
Akukho nto apha okwangoku (vigo-spain)
Phendula u-Alcino Oliveira
UJoaquin Celada Seco sitsho
Ifumaneka phi? Akukho nto eMadrid. Sukuthetha izinto ungakhange uzame kuqala nceda
Phendula Joaquín Celada Seco
UJaime Aranguren sitsho
Ndizamile ukujonga malunga nale mac / Uhlaziyo kwaye andifumananga ngaphezulu kohlaziyo lwe-iMovie, kodwa ukungena kwiphepha le-Apple, sele ndilibonile ikhonkco.
Phendula kuJaime Aranguren
URoberto J. Cordero sitsho
Nangona ingabonakali kum njengoluhlaziyo ngokwalo, iyavela ikhutshelwe xa ndenza uphando oluthile.
Phendula kuRoberto J. Cordero
URuben mnyama falconi sitsho
Awukwazi ukusebenzisa iMicrosoft Office?
Phendula uRuben Black Falconi
URoberto Sanchez sitsho
Phendula URoberto Sanchez
UJhon Edison Castaño sitsho
Ewe, yinguqulelo ka-2011 engaxhaswanga, kodwa ingxelo ka-2016 isebenza kakuhle.
Phendula Jhon Edison Castaño
UJhon Edison Castaño kwinqaku likaMicrosoft ngexesha elidlulileyo walumkisa ukuba akukho nguqulo iya kuhambelana
Ayikafumaneki eMexico, ubuncinci eGuadalajara. ngokubhekisele
La Palma, Canary Islands ngaphandle kweendaba.
UAntonio J Morales sitsho
Ukuba ayiveli kwiAppStore, khangela iSierra ePhakamileyo kwaye iya kuvela
Phendula ku-Antonio J Morales
Ukuba ndiyakhuphela kwiVenkile yeApple indixelela xa ndifaka ukuba kwenzeke impazamo kwaye ayinakujonga i-firmware. Omnye umntu wenzeka?
Khuphela iJalisco, eMexico. Siza kubona ukuba kwakunjani nge-ofisi ka-2011 kunye no-2016, kunye nokusebenza kwayo kwaye ngakumbi kuya kwenzeka ntoni kwibhetri.
IAriyeli flomenbaum sitsho
Ndiyikhuphele ngoMvulo kwi-Sore App kwaye ndivela eArgentina!
Phendula kwiAriel Flomenbaum
Sele ndihlaziye i-macbook pro yam nge-ofisi ka-2011 nayo yonke into esebenza ngayo yonke into.
Ndiyikhuphele kwaye indihlaziye kakuhle kodwa i-hard drive yam sele ijijile njengasekuqaleni kweSierra. Iintsuku ze-3 zisebenza kakuhle, yayikukuvula isiciko kwaye endaweni yokuvuka ...
Isikrini "sombane" esimnandi, oko kukuthi, idiski yam ye-SSD ilayishiwe.
Bendihambile ekhaya kangangeentsuku ezili-15 kwaye ndingenayo ikopi yeTIMEMACHINE.
Ngale njikalanga lixesha lokuba ndibone okwenzekileyo kwaye ndibone ukuba ndiphilile na.
Ke kungcono ungafaki uhlaziyo ukuba nje ezi ngxaki azisombululeki, kwaye kwi-intanethi ndiyabona ukuba ayindim ndedwa owenzekileyo ...
Emva kokuhlaziya iMasOS ePhakamileyo yeSierra 10.13, andisakwazi ukuhambisa iifayile ezinkulu kune-2 GB kwiDrive yangaphandle kwiFomathi ye-MS-DOS (FAT32), xa ndizama ukuyenza ndifumana isilumkiso esithi: Inqaku «ividiyo. mkv »ayikwazi ukuba ungakopa kuba inkulu kakhulu kwifomathi yevolumu.
Ndenze ukuhanjiswa kwefayile efanayo kwimemori ye-USB kwifomathi ye-APFS, ngaphandle kwengxaki.
Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV ingafika kule veki